तपाईं कुनै पनि काम प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि, तपाईं आधारभूत काम तत्परता कौशल हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, तपाईं पढ्न र लेख्न, वा कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्छ, वा भर्न एक काम आवेदन सिक्न सक्नुहुन्छ.
المكتبات والمدارس والمراكز المجتمعية غالباً ما يكون لديها برامج تعلم هذه المهارات الأساسية. كذلك هناك جمعية خيرية تسمى النوايا الحسنة. तपाईं जहाँ तपाईं सद्भावना प्रयोग लुगा र घरेलू वस्तुहरु किन्न सक्नुहुन्छ पसलहरु देखेको हुन सक्छ. सद्भावना स्टोर पैसा प्रयोग मान्छे कामको लागि तयार र काम पाउन मदत गर्न. तिनीहरूले अंग्रेजी भाषा र अन्य आधारभूत पाठ प्रदान. तपाईं सिक्न गर्दा बाल हेरविचार मा मदत गर्न सक्छ. यस्तो बैंकहरू र अस्पताल मा काम कौशल रूपमा केही ठाउँहरू, विशिष्ट कार्यात्मक सद्भावना प्रशिक्षण कार्यक्रम, मा.कौशल प्रशिक्षण र समर्थन लागि स्थानीय सद्भावना खोज्न
स्थानीय व्यापार केन्द्र प्रयोग
हरेक समुदाय मान्छे काम पाउन मदत गर्न एक कर्तव्य स्टेशन छ. अमेरिकी रोजगार केन्द्र अमेरिकी सरकारबाट मुक्त सेवाहरु छन्. रोजगार केन्द्र नाम प्रयोग “CareerOneStop” इन्टरनेटमा, तर यो पनि एक स्थानीय नाम आफ्नो राज्य वा शहरमा हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, यो टेक्सास कर्तव्य स्टेशन भनिन्छ “कर्मचारीहरु समाधान”. मिनेसोटा मा भनिन्छ काम केन्द्र “CareerForce”.
रोजगार केन्द्र काम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण वा पहुँच को प्रावधान सहित, थुप्रै तरिकामा मदत गर्न सक्छ. केही कर्तव्य स्टेशन शरणार्थी र आप्रवासी लागि कार्यात्मक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम छ! निकटतम काम केन्द्र तपाईं खोज्न
साइन अप Jobcorps
कार्यक्रम “काम कोर” जवान मानिसहरू र जवान मान्छे बीचका लागि शिक्षा र व्यावसायिक तालिम लागि निःशुल्क कार्यक्रम प्रदान सरकार कार्यक्रम छ 16 र 24 वर्ष. प्रशिक्षण यस्तो CNA, दन्त सहायक, फार्मेसी टेक्नीसियन, चिकित्सा प्रशासनिक सहायक, स्वास्थ्य एकाइ संयोजक, नर्स रूपमा स्वास्थ्य हेरविचार कार्यहरु समावेश.सिक्न अय्यूब कोर
सामुदायिक कलेज जाने
सामुदायिक कलेजहरु एक स्कूल छ लागि सबै उमेरका वयस्क विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्ताव. तपाईं ईन्जिनियरिङ् दुई वर्ष पाठ्यक्रम गर्न साँझ कक्षाहरू मा अंग्रेजी भाषा सिकेर केहि गर्न सक्छन्. सामुदायिक कलेजहरु धेरै प्रशिक्षण पाठ्यक्रम छ. शिक्षण निजी विश्वविद्यालय र कलेजहरु भन्दा धेरै कम छ. सामुदायिक कलेज फेला
सिकारु काम गर्दा सीप सिक्छन् जो कसैले छ. को प्रशिक्षुओं काम मा प्रशिक्षण र अक्सर कक्षाकोठामा केही पाठ छ. तपाईं एक विशिष्ट काम चासो छ भने यो तपाईंको लागि राम्रो बाटो छ – उदाहरणका लागि, कार मर्मत वा बिजुली भएकोमा – तर तपाईं अझै कौशल छैन. CareerOneStop तपाईंले खोजी तिनीहरूलाई लागि गर्न सक्ने apprenticeships सूची छ.आफ्नो क्षेत्रमा apprenticeships खोज्न
यो सूची मात्र apprenticeships को संभावनाहरु केही कवर सक्छ. هل هناك شركات بالقرب منك تبحث دائمًا عن العمال؟ يمكنك أن تسألهم إذا كانوا راغبين في أخذك كمتدرب وتدريبك. अक्सर, विश्वसनीय कर्मचारी र कठिन काम किनभने यो तपाईं कौशल सिकाउन सक्छन्, कुनै पनि कौशल भन्दा हाकिमहरूले गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ.
प्रमुख शहर, र पनि केही साना समुदायमा, तपाईं काम गर्न newcomers प्रशिक्षण मदत संगठन पाउनुहुन्छ. यो एजेन्सी को resettlement वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हुन सक्छ. यसलाई केही जब newcomers तालिम एक परियोजना हुन सक्छ.
यहाँ काम गर्न newcomers तालिम केही ठाउँ हुन्:
बोस्टन: नयाँ इङ्गल्याण्ड को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान उच्च मागका क्षेत्रमा काम प्रशिक्षण लागि दुई कार्यक्रम प्रदान गर्दछ: आतिथ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम र स्वास्थ्य हेरविचार सेवाहरूको प्रमाणीकरण.
केन्द्रीय टेक्सास: राजधानी आईडिया वयस्क उच्च मागका जब प्रशिक्षण मा मद्दत गर्छ.
कोलोराडो: लेना महिला बीन परियोजना जबकि सुक्खा खाना उत्पादन मानिसहरू कार्यात्मक र व्यावसायिक सीप प्राप्त.
मिनेसोटा: प्रगति Communidades संयुक्त Latinas सेवामा (छनकहरू) निःशुल्क पाठ्यक्रम9स्वास्थ्य हेरविचार, निर्माण र ग्राहक सेवा क्षेत्रमा वयस्क लागि सप्ताह.
पनि मिनेसोटा को राज्य मा: साझेदारी ह्मोङ प्रदान गर्दछ अमेरिकी काम प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च औद्योगिक कौशल माग सिकाउन.
maine: नयाँ अमेरिकी सतत कृषि परियोजना यो किसान बन्न मदत गर्छ.
यूटा: को स्पाइस भान्सा खाना व्यापार को क्षेत्र मा अग्रगामी हुन शरणार्थी को प्रशिक्षण.
वाशिंगटन राज्य: शरणार्थी प्रशिक्षण परियोजना र शरणार्थी खाना सेवा उद्योग प्रविष्ट गर्न.
अगाडि लाग्छ – प्रविधिको क्षेत्रमा एक क्यारियर मा प्रशिक्षण
وفقاً لمشروع ترميز اللاجئين ، هناك أكثر من نصف مليون وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية! धेरै शहर मात्र नयाँ आगमन लागि कम्प्युटर-coded कार्यक्रम छ. यहाँ ती दुई छन्:
तपाईंले पहिले नै कम्प्युटर कौशल छ वा सिक्न चाहन्छन् भने, कम्प्युटर र इन्टरनेट सुरक्षा मा प्रशिक्षण पनि विद्युतीय सुरक्षा भनिन्छ जो विचार. त्यहाँ विद्युतीय सुरक्षा को कौशल भएका मान्छे को लागि उच्च मांग छ, र भविष्यमा लागि राम्रो काम हुनेछ.प्रविधि जब सिक्न
प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, तपाईं शायद एक परीक्षण पास गर्नुपर्छ. शायद तिमी परीक्षण अघि केही प्रशिक्षण आवश्यक हुनेछ.
तपाईं आवश्यक प्रमाणपत्र खोज्न CareerOneStop प्रमाणीकरण खोजकर्ता.
मदत Upwardly विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न नयाँ प्रवेशकों लागि व्यवसायीक.
आधारभूत कम्प्युटर कौशल तपाईं कहाँ सिक्नुभयो
GED® पाठ्यक्रम निःशुल्क अनलाइन
वयस्क शिक्षा – कसरी स्कूल फर्केर जान
आफ्नो शहर मा काम प्रशिक्षण को लागि खोज